Manery ny fiovàna amin’ny alalan’ny fitorahana blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2018 14:45 GMT
Araka ny fitanisana nalaiko avy tao amin'ny blaogin'i Brunei Resources:
”Mila fanerena avy any ivelany isika (ny fanjakana) ary ity no toerana ahafahan'ny mpamaky blaogy tonga manampy amin'ny fanaparitahana ny fahalalàna”
ary ny antsoko manaraka ho an'ireo Blaogera Bruneana maro mba handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena;
” Raha mba maro mantsy ny toa antsika!”
Navoakan'ny LSM ny lahatsoratra iray tao amin'ny OurLocalStyle izay nangady lalindalina kokoa ary nilaza fa tsy resaka isa fa ny vtoatinn-javatra no olana.
Afaka manery hisian'ny fiovana na ao anatin'ny rafitra ara-panabeazana na ao amin'ny sehatry ny fiarahamonina ireo blaogera Bruneana. Tsy mihevitra aho hoe mifototra amin'ny fitondrana olona hiblaogy na hamela fanehoankevitra ilay olana. Fa ny fankaherezana lahatsoratra sy resaka mandrisika mifandray kokoa amin'ny lasitra Bruneana .
Narahina fanehoankevitra avy amin'ny One Way Down The Highway manazava ny mety hifandraisan'ny tsy fahampiana vontoaty ao anatin'ny Rafi-Panabeazana Bruneana izay tsy dia tena mankahery loatra ny ”fieritreritana ivelan'ny boaty” kokoa izany avy eo.
Toe-javatra tsy fantatra fiantombohana ny fanambaranao hoe ”Afaka manery fiovana na ao amin'ny rafi-panabeazana aza ny blaogera Bruneana…”. Tsy manome ny fahaizana feno ilaintsika mba hanaovana zavatra toy izany ny rafi-panabezan'i Brunei. Ary, na aiza na aiza, mihazakazaka daholo mba hialana amin'ny rafitra izay taloha, nanempotra ny fahafahany mihevitra sy mino fa afaka hatsaraina ny firenena, ary mbola manohy izany foana hatramin'izao, ny ankamaroan'ireo vitsy an'isa manana izany talenta izany.